Iindaba -Ujongana njani nezinto zokupheka zentsimbi ezisetyenzisiweyo ezinomhlwa
Ujongana njani nezinto zokupheka zentsimbi ezisetyenzisiweyo ezinomhlwa
I-cookware yentsimbi oyifumene njengelifa okanye oyithengileyo kwintengiso yezorhwebo kaninzi ineqokobhe elilukhuni elenziwe ngomhlwa omnyama kunye nokungcola, oku kujongeka kungathandeki. Kodwa ungakhathazeki, inokususwa ngokulula kwaye imbiza yesinyithi ingabuyiselwa kwinkangeleko yayo entsha.
1. Beka umpheki wesinyithi eofini. Qhuba yonke inkqubo kube kanye. Inokutshiswa ngomlilo wenkampu okanye kumalahle iiyure ezi-1/2 de umpheki wesinyithi ajike abe bomvu mnyama. Igobolondo elomeleleyo liya kuqhekeka, liwe, kwaye libe luthuthu. Lindela ipani ukuba ipholile kwaye uthathe la manyathelo alandelayo: Ukuba iqokobhe elilukhuni kunye nomhlwa kuyasuswa, sula ngebhola yentsimbi.
2. Hlamba umpheki wesinyithi ngamanzi afudumeleyo nangesepha. Sula ngelaphu elicocekileyo.
Ukuba uthenga umpheki omtsha wesinyithi, ugqityiwe ngeoyile okanye isambatho esifanayo ukukhusela ukurusa. Ioli kufuneka isuswe ngaphambi kokuba izinto zokupheka zilahlwe. Eli nyathelo liyimfuneko. Faka emanzini ashushu anesepha kangangemizuzu emi-5, emva koko uhlambe isepha kwaye womile.
3. Vumela umpheki wesinyithi omile kakuhle. Ungayitshisa ipani esitovini okwemizuzu embalwa ukuqinisekisa ukuba yomile. Ukujongana nezinto zokupheka zentsimbi, ioyile kufuneka ingenwe ngokupheleleyo kumphezulu wesinyithi, kodwa ioyile namanzi azihambelani.
4. Yambathisa ngaphakathi nangaphandle kompheki ngeoli yeoli, zonke iintlobo zeoyile yenyama okanye ioyile yombona. Nika ingqalelo kwi-cover cover.
5. Beka ipani kunye nesivalo ujonge ezantsi ezantsi uze usebenzise ubushushu obuphezulu (150 - 260 ℃, ngokokukhetha kwakho). Fudumeza ubuncinci iyure ukwenza umaleko ongaphandle "onyangiweyo" epanini. Olu luhlu lwangaphandle lunokukhusela imbiza ekurheni nasekubambeleleni. Beka isiqwenga se-aluminium okanye iphepha elikhulu lokubhaka itreyini phantsi okanye ezantsi kwetreyi yokubhaka, emva koko ulahle ioyile. Kupholile kubushushu begumbi ehovini.